Ama-Coach Coach Limited, eMalta
I-Vintage Maltese Bus
Siyaziqhenya ngokusebenza omunye wabaqashi abaqashi nabakhulu kunazo zonke, i-Mini Bus, ne-Chauffeur Driven Car Fleet.
Igama likaNdunankulu eMotweni yezokuThutha
Igama lethu lakhiwe ngokuzibophezela kumazinga aphezulu, isevisi yekhwalithi, nokugxila kwamakhasimende.
Iminyaka eyi-70 yokuqasha abaqeqeshi
Kusukela ku-1944, sinikezwe ukuthula kwengqondo kumakhasimende adinga izinsizakalo zokuthutha eMalta.
WAMELWA KWE-PARAMOUNT COACHES
I-Paramount Coaches iyinkampani ehamba phambili yokuthutha eMalta enikeza uMqeqeshi Wokuqasha, Mini Bus, kanye nezinsizakalo ze-Chauffeur Driven Car eMalta kusukela ngo-1944. Isithembiso sethu yisimo sengqondo sobuchwepheshe esigxile ezidingo zamakhasimende ukuqinisekisa izixazululo ezithembekile zokuthutha.
Siyaziqhenya ngokusebenza komunye wemikhumbi yezilwane ezinkulu kunazo zonke zeMalta ukuhlinzekela izinga eliphakeme lezinkonzo ezikoleni, amanyuvesi, ama-ambassade, amahhotela, ama-DMC, abaqhubi bezokuvakasha, uHulumeni kanye neziphathimandla zendawo.
Amaklayenti ethu aqhubeka ekhetha ukuthula kwengqondo esibaphayo. Sifinyelela lokhu ngokusebenzisa ulwazi lwethu oluhle lokuthutha eMalta kanye nekhono lethu lokusingatha noma yiziphi izenzakalo ezingase ziphakame.
Ngenethiwekhi yethu yendawo, sikwazi ukuhlinzeka ngamasevisi okuthutha okuthenjelwayo futhi angabizi kakhulu eMalta ngemicimbi yezinkampani, abagibeli bezokuhamba ezihamba ngezinyawo, ukuhanjiswa kwezindiza kanye nokuthutha esikoleni / ekolishi.
Singabantu inkampani enkulu kakhulu yokuthutha esikoleni eMalta enikeza ezokuthutha kubafundi emphakathini, ngasese, ezikoleni zangaphandle nasezikoleni zesonto.
Sinikeza uhla olubanzi lwezohambo ze-Malta ne-Gozo ekwakheni isipiliyoni esingenakulinganiswa sezimali zethu zemvelo nezomlando.
UMALTA UKUPHILA KWESIKHATHI
Ukuhlinzeka umqeqeshi wesikhumulo sezindiza ngesikhathi esifanele futhi osebenzayo uhambisa phakathi kweMalta International Airport kanye namahhotela / izindawo zokubhuka eMalta naseGozo.
I-CRUISE LINER TERMINAL TRANSFER
Ukuhambisa ukudluliselwa emikhumbi ye-cruise bese ukhomba ekudlulisweni kwamaphoyinti nezindawo ezizungeze i-Maltese Islands.
CORPORATE NEZINYE IZENZAKALO
Ukuletha ukuthuthwa kwezithunywa, ukudluliselwa kwezindiza, kanye nezidingo zokubheka ngezinsiza ngokusebenzisa inkonzo enhle kakhulu, ukuphendula ngokushesha, nokuthembeka ngokuphelele.
IMISEBENZI YOKUTHUTHA NOKUCHWEPHESHA
Uma ufisa ukubhuka noma ukwenza ucwaningo, zizwe ukhululekile ukuxhumana nabasebenzi bethu bezobuchwepheshe nabanobungane. Bazokusiza ekuphenduleni noma yikuphi imibuzo ongase ube nayo nangokuhlangabezana nezidingo zakho zokuthutha.
Abaqeqeshi abakhulu bebelokhu behlinzeka ngezinsizakalo zokuthutha eMalta Football Association kusukela ngo-2002.
Amaqembu aqaphelayo kazwelonke nakwamanye amazwe ahlonishwayo onke asebenza kahle yi-Paramount Coaches:
I-ARMENIA, i-BULGARIA, i-CYPRUS, i-DENMARK, i-FINLAND, i-GEORGIA, i-GREECE, i-INTER, i-ISRAEL, iLATVIA, i-LUXENBOURG, iMACEDONIA, i-MANCHESTER UNITED, i-IRELAND ENYANJE, i-NORWAY, iPORTUGAL, SWEDEN,
I-Malta Football Association
"Ulimi lwe-EF Ukuhamba luye lwasebenzisa i-Paramount Garages ngeziningi zezidingo zalo zokuthutha iminyaka engaphezulu kwe-15. Izicelo zethu zihlangane njalo nokuqeqeshwa okuningi futhi ngokusebenzisa isevisi okuhlale ethembekile futhi ithembekile. Ikhwalithi yabaqeqeshi kanye nesimo sengqondo sabashayeli sibonisa nalokhu. "
Isikole se-EF LANGUAGE
Njengoba usanda kuphuma ngesikebhe sama-300 aseMelika nakwezinye izizwe ezivela e-Tripoli, eLibya ngemuva kwethu, ngifuna ukuthatha isikhashana futhi ngizwakalise ukwazisa okuqotho kuwe nakuParamount Coaches Ltd. Ngokusiza kwakho okuphakade ngenkathi kukhishwa futhi imizamo elandelayo basize abahlengikazi.
Ukuzimisela kwakho ukusebenzisana eduze nabasebenzi base Embassy ngenqubo yokukhishwa kwakubaluleke kakhulu ekusebenziseni ngokuphumelelayo nangempumelelo labo abaphunyukayo futhi bekwazi ukuthola usizo oludingekile. Ngokuyinhloko, ukuguquguquka kwakho nokuqonda kwakho njengoba isimiso sokuhamba kwesitimela sashintsha kanye nesimo sezulu saziswa ngobuqotho. Asikwazanga ukusiza ngokuphumelelayo abaphuthumayo ngaphandle kokusekelwa nokuzibophezela kuParamount Coaches Ltd. "
UMBUSI WASE-US WAMALTA
UMnu. Douglas W. Kmiec - Ummeli We-US
"Amagaraji amaningi ase-Mosta, manje sebelokhu bekhonza iminyango ehlukahlukene yaseYunivesithi ngemisebenzi efanele yokuthutha, iminyaka yokugcina ye-35.
Ngalesi sikhathi, sithole le nkampani yokuthutha ethembekile futhi ikhasimende elihle kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi ungumqeqeshi, isithuthuthu, imoto eqhutshwa ngumshayeli ukugcina isikhathi nokulethwa kwezidingo kuye kwaba yiyona engcono kunazo zonke ezingayithola kulezi ziqhingi.
Ngaphandle kwamanani okuncintisana kakhulu, abashayeli abanobuhle nokugcina isikhathi sithole uParamount ukuba ngumlingani oyinhloko ekusizeni ukuba sibe nokuncintisana nokupakisha izinhlinzeko ezinhle kakhulu kubafundi bethu abaningi bezinye izizwe nezivakashi zezifundo. "
UMALTA UNIVERSITY HOLDING COMPANY
LOKWENZA US UKUPHELEKILE
Iminyaka yethu ye-70 yokuzibophezela ekugqibeleni isinikeze ulwazi olubanzi emkhakheni wezokuthutha eMalta, okusivumela ukuba sinikeze ukuthula kwengqondo kanye nenkonzo yobuchwepheshe kumakhasimende ethu.
Iminyaka eyi-70 Yezokuhlangenwe nakho
Nsuku zonke usuku olusha kithi futhi sisebenza kanzima kakhulu ukwanelisa amakhasimende ethu yonke indawo.
I-Malta - iYurophu.
Vula i-24 / 7
Inqubomgomo yethu Yezempilo Nokuphepha
I-copyright © 2017 - Yenzelwe ngu Eyelead + Eyetech . Wonke Amalungelo Agodliwe